Iindaba -umzi mveliso wezonyango wase China ungenise ixesha legolide
Icandelo lezeshishini lezonyango lase China lazisa ixesha legolide
Ngokwenkampani yophando kwimarike uFrost & Sullivan, isixhobo sonke sase China sonyango kunye nemakethi yezixhobo kulindeleke ukuba ziphindaphindwe zibe yi-US $ 53.7 yezigidigidi ngo-2015. Ukusukela ngo-2009 ukuya ku-2011, urhulumente kulindeleke ukuba atyale i-US $ 124 yezigidigidi kuhlaziyo lokhathalelo lwempilo, ngakumbi ngowama-2011 njengonyaka wokuqala “weSicwangciso seShumi elinesiBini seMinyaka emihlanu”, esiya kuthi siphumeze ingxelo epheleleyo yenkqubo yokhuselo lonyango esisiseko, nesiza kuba yinto ebalulekileyo kwimbali yohlaziyo lwezonyango lwase China. Imbalasane yonyaka. Iinkcukacha-manani zibonisa ukuba ngo-2011, icandelo lezonyango laseTshayina nezempilo liza kuba kwindawo yesithathu kwihlabathi.
Ukujonga idatha ye-MEDICA kunye ne-CompaMED, iqonga lemiboniso yezonyango elihamba phambili emhlabeni kwi-2010, icandelo lezonyango kwihlabathi liphela ligcine uphuhliso oluzinzileyo. Kunyaka ophelileyo, isikali semiboniso ye-MEDICA kunye ne-CompaMED yomibini yolondolozo olukhulayo, ngakumbi umlinganiso wemiboniso yaseTshayina inyuke unyaka nonyaka. Oku kukwabonisa ukukhula kunye nenkqubela phambili yezonyango e-China kule minyaka idlulileyo.
Njengomsitho ophambili kushishino lwezixhobo zonyango lwaseTshayina, i-2011 yeZizwe ngeZizwe ngeZonyango kunye neMiboniso yezixhobo (CHINA MED2011) izakubanjelwa kwiZiko leNgqungquthela leSizwe laseBeijing ukusukela nge-25 ukuya kwi-27 kaMatshi. I-CHINA MED2011 ixhaswe ngemali liSebe lezeMpilo leSebe loKhuseleko lwaBantu baseTshayina, iZiko lezoRhwebo lase China, i-China, i-Huitong Xingye International Exhibition (Beijing) Co, Ltd. kunye neDusseldorf Exhibition (Shanghai ) Co, Ltd ukunceda iinkampani kunye nezibhedlele kwishishini lezixhobo zonyango laseTshayina kuye kwangenisa iminyaka yegolide kwaye balixhakamfula ithuba lemarike.
Yakha iqonga lesiphelo esiphakamileyo kwaye uzibophelele kukhuthazo lwehlabathi
I-CHINA MED yasekwa okokuqala kwi-1989 kwaye yabanjwa kanye ngonyaka. Isikali siye sanda unyaka nonyaka, kwaye umboniso uqhubeke ukwanda. I-CHINA MED ayisiyo iwindow kuphela yokubonisa ishishini lezonyango kwihlabathi, kodwa ikwayindawo yokuqala yokumisa amaziko onyango e-China ukungena e-China. I-CHINA MED, njengesixhobo sokuqala sasekhaya samayeza kunye nezixhobo zomboniso eziqinisekiswe yi-International Exhibition Industry Association (UFI), ibisoloko ibambelela kwinjongo yamazwe aphesheya kunye nobungcali, kwaye izinikele ekudaleni iqonga lezentengiso lemiboniso ephezulu isixhobo sonyango kunye nezixhobo zeshishini.
Ukunceda iinkampani ukuba ziqonde ngcono amathuba amatsha entengiso, abaququzeleli bakhuthaza ngamandla iCHINA MED 2011. Umboniso kulindeleke ukuba ube nommandla womboniso weemitha zesikwere ezingama-30,000, malunga nama-550 ababonisi kunye nabakhenkethi abamalunga nama-26,000, kubandakanya iidan kunye nabalawuli bezixhobo ezivela emkhosini nakwizibhedlele ezahlukeneyo zasekuhlaleni, kwaye baninzi abathengisi kunye neearhente ezinokuthengwa okungaphezulu kwezigidi ezi-5. .
Ngelixa etsala umdla wotyalo-mali e-China, umququzeleli usebenzisa ngokupheleleyo izixhobo zomboniso iyunithi yenkxaso yamazwe ngamazwe i-MEDICA kunye namaqonga olwazi oluphambili lwehlabathi kwezonyango ukukhuthaza umboniso kwilizwe liphela. Kuyaqondakala ukuba okwangoku iminquba ekhethekileyo ithengisiwe, kunye nokubonelelwa kweminquba esemgangathweni nayo iqinile.
Ukongeza, iwebhusayithi esemthethweni yomququzeleli ikwabonelela ngeenkonzo ze-Intanethi ezingaphazanyiswanga zeeyure ezingama-24 zemiboniso kunye neendwendwe, kunye nokuqhubeka nokwenza inkonzo yonke. Ukusukela ngo-Epreli 1, 2010 ukuya kuDisemba 22, itrafikhi iyonke kwiwebhusayithi yafikelela kumaxesha ali-153,947, ebephezulu kakhulu kunamaxesha ali-119,988 kwangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, ukonyuka konyaka-nge-28.30%. Umququzeleli useke umnxeba weenkonzo zabathengi 4006-234-578 ukubonelela ngeenkonzo zonxibelelwano kubakhenkethi nakwimiboniso. Ezi nkonzo ziye zamkelwa ngababonisi kunye neendwendwe, kwaye uninzi lwabathengi lwanelisekile.
Hlanganisa iimveliso ezintsha kwaye utshixe izihloko ezishushu
Olunye uphawu lwe-CHINA MED 2011 kukuba iinkampani ezaziwayo kwezonyango ziya kubonisa iimveliso zazo zamva nje. Ukuza kuthi ga ngoku, uToshiba uqinisekisile ukuba izakubonisa i-640-slice computed tomography “Aquilion ONE”, efanelekileyo isifo sokuchongwa kwesifo sentliziyo, ngesantya sokuskena ngokukhawuleza, idosi encinci yemitha kunye nokusetyenziswa konjiniyela, kunye nemifanekiso ecacileyo. Ukuxhamla ngokuhlangeneyo e-US-China kuya kuzisa inkqubo ye "Da Vinci yoPhando lweRobhothi" ngokudibeneyo ephuhliswe yi-Intuitive Surgical yaseMelika yi-NASA nabanye. Njengeyona robhothi yesithathu ehambele phambili kwezotyando emhlabeni, inesona sihlahla sihle ehlabathini. Inokugqibezela amanyathelo achanekileyo anzima kubantu abaqhelekileyo, anjengemisebenzi engenakwenziwa ngabagqirha be-endoscopic ukuyigqiba kwisithuba esincinci. Njengomnye wabavelisi bezixhobo zonyango lwe-radiotherapy emhlabeni jikelele, u-Elekta waseSweden uza kugxininisa isantya sayo sendawo yedijithali ehambelana nendawo yokuphucula, inkqubo enamandla yokulawulwa kolwazi lwethumba, umjikelo wokujikeleza kobungakanani betekhnoloji yonyango ye-arc (Vmat), Intuity, isisombululo esidibeneyo sethumba imaging kunye nonyango, kunye ne-Symmetry, isisombululo esitsha sesisombululo sokulawulwa kwesisu.
Imisebenzi engaphezulu kwama-20 kwindawo yesiza kwiindidi ezine, kubandakanya nokucinga ngezonyango, ukhathalelo lwempilo, itekhnoloji yeklinikhi, kunye nokubhida kunye nokuthenga, kuya kubanjwa ngexesha lomboniso. Phakathi kwabo, i “Mongameli Summit Forum” yabanjwa okokuqala ngqa. Iforamu izakumema iingcali zezibhedlele kunye neenkokheli zeSebe lezoThengiso likaRhulumente le-Ofisi yoMphathiswa Wezimali ukuba baxoxe ngemiba eyahlukeneyo yolawulo lobuchule bezibhedlele kwaye bajonge imisebenzi yokubhida kunye nokuthengwa kwesibhedlele kwindawo leyo. Ukuze usebenze ngokubambisana nesikhokelo ngokubanzi kunye nomgaqo-nkqubo "weQhinga lokuPhambili, Gxila ezantsi" kumzi mveliso wezonyango waseTshayina nakwezempilo, iCHINA MED2011 kunye noMbutho waseTshayina wezoBunjineli boBunjineli ziya kubamba "Inkqubo yobuNtu, yoSapho kunye neNkqubo yoLwazi yezeMpilo yoLuntu. Isemina ”, kwaye umeme ngokukhethekileyo iingcali ezivela kwi-Institute of Aviation Medicine, i-General Hospital ye-People's Liberation Army, i-Fourth Military Medical University, kunye namaziko olwazi akude eShanghai, eShenyang, eWuxi nakwezinye iindawo ezixoxwayo zaze zaziswa neengcali zeshishini.
—— Iindaba zeBeijing